नेपालमा आलोचित बनेको राष्ट्रपतिको भ्रमणबाट अमर बमलाई जिवनको आशा - TV Annapurna
November 13, 2017 April 29, 2018 Annapurna TV
२००३ सालबाट दुबईको अविर जेलमा जेल जिवन विताईरहेका दार्चुलाको साविकको धारी गाविस वडा नं. ५ का अमरबहादुर बमको परिवारलाई त्यो बेला छोरो फर्किने आश पलाउँछ जतिबेला देशका प्रमुख व्यक्तिहरु युएई भ्रमणमा जान्छन् ।
बिडम्बना अहिलेसम्म युएई भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले अमरबहादुर बमको बारेमा केही बोल्न सके नत केही बुझ्नै नै चाहे ।
१४ वर्ष देखी छोराको बाटो हेरेर पर्खिरहेका ७१ वर्षिय बुवा कर्णबहादुर बमलाई छोरो फर्किने आश फेरी एक पटक पलाएको छ, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको युएई भ्रमणले ।
सजाय के हो ?
एकजना भारतीय व्यापारी शरदसेठ्ठीको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै दुबईको अदालतले अमर बमसहित दुई जना भारतीलाई मृत्यु दण्ड सुनाएको छ । अमरलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको ४ वर्षपछि मात्रै दुबईमा रहेको नेपाली दुतावासले थाहा पाएको थियो । तर दुःखको कुरा अहिलेसम्म उनको प्रतिरक्षाका लागी वकिल नियुक्त गरिएको छैन् ।
उनिसँगै मृत्युदण्ड सुनाईएका भारतीय नागरीकद्वय मनोज मुदाना र करनसिंह राजपुतले पनि अमर निर्दोष रहेको लिखित बयान दिएका छन । उनीहरले औठाछाप गरेर अमर हत्या योजनाबारे बेखबर रहेको र गाडीमात्र चलाएको भनेर उनलाई माफी दिन भनी निवेदन दिएका छन् । तरपनि अमर छुटेका छैनन् ।
भाषाको अज्ञानताले जीवन…
भारतको एक मार्बल कम्पनीमा सन् २००१ देखि कार्यरत बमलाई एक जना भारतीय नागरिकले बीस हजार भारतीय रुपैयाँ तलब दिने लालच देखाई सवारी चालकका रुपमा यूएई पुर्याएका थिए ।
यसै क्रममा यूएई आएको तेस्रो दिन दुबई स्थित इन्डियन क्लबमा दुई भारतीय नागरिकलाई पुर्याउन गएका उनलाई बाहिर बस्न लगाएका थिए । ती भारतीय नागरिक उक्त क्लबमा गएर एक जना सेट्ठी थर भएका भारतीय नागरिकको हत्या गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
हत्यापछि ती दुई जनालाई यूएईको सारजाहस्थित पोर्टसम्म छोड्न पुगेका अमरबहादुर बम भाषा र अन्य ठेगानाको अज्ञानताका कारण पक्राउ परेका थिए । उक्त हत्याकाण्डमा सवारी चालकको रुपमा सहयोग गरेको भन्दै दुबई अदालतले ज्यान मुद्दा दायर गरी जेल जीवन हुँदै सन् २००७ मा मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो । त्यस मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै दुबई अदालतले अभियुक्त मनोज करन र अमरबहादुर बमलाई मृत्युदण्ड दिने फैसला सुनाएको थियो। सोही फैसलालाई यूएईको सुप्रिम कोर्टले पनि पास गरेको छ ।
अज्ञानता र पैसाको प्रलोभनमा परी हाल मृत्युदण्डको दिन पर्खेर जेल जीवन बिताइरहेका अमरबहादुर बमको उद्दार गर्न नेपालका राष्ट्रपति स्तरबाट सिधै यूएईका सेखलाई विशेष अनुरोध गरिनुपर्ने आवाज यूएईको नेपाली समुदायमा उठिरहेको छ । विगतमा बमलाई मृत्युदण्डको सजायबाट मुक्ति दिलाउन सुदूर पश्चिम सेवा समाज यूएईले पनि तत्कालिन राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवलाई सुझाएका थिए
राष्ट्रपतिको भ्रमण तय भएदेखि नै कर्णले नेताहरुसमक्ष आफ्नो छोरा छुटाइदिन अनुरोध गरेको बताउँदै बुवा कर्णबहादुर बम भन्नुहुन्छ, छोरालाई माफी दिलाउन राष्ट्रपति भण्डारीले युएईका राष्ट्रपतिसँग कुरा गर्नेछिन भन्ने अलिकति आशा छ ।
अमरको मुद्दा लिएर राष्ट्रपति भण्डारी पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु बाबुराम भट्टाराई, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई भेटिसकेका छन । ‘छोराको बिषय सारालाई थाहा छ,’ बलमे भने ‘सरकारले पनि चासो दिएको छ । पक्कै यो बिषय राष्ट्रपतिले उठाउनुहुनेछ । र, मेरो छोरा आफ्नो देश फिर्नेछ ।’
‘हत्यामा छोराको नियतवश संलग्नता नरहेको भनेर राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री सबैलाई भेटेर अनुनय गरेको छु,’ कर्णले भने, ‘आफु त डाँडापारीको घाम जस्तै भइसक्यो । कतिखेर डुबिन्छ थाहा छैन । अमरको आमा पनि छोराको मुख हेर्न नपाई बितिन । मलाई अरु त होइन बुहारीको र्साहै चिन्ता छ ।’
विहे भएको २५ दिनमै मलाई (अमरबहादुर बमकी श्रीमती धनमति) छोडेर वैदेशिक रोजगारिमा जानुभयो वर्षौ वित्यो अहिले सम्म त फर्किने आशले नै कुरेर बसेकी छु ।
दार्चुलाका नेतृत्वकर्ता भन्छन्
बमको गृहजिल्ला दार्चुलाका नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडु भन्नुहुन्छ, दुवईमा रहेका विभिन्न मानव अधिकार संस्थाहरुलाई सल्लाह सुझाव दिने काम भएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा पनि मेरै दवावमा क्याविनेट निर्णय नै गरेर त्यहाँको सेखलाई अनुरोध गरिएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोईराला हुँदा मेरै पहलमा तत्कालिन सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाललाई विशेष दुत बनाएर त्यहाँको सेखलाई भेट्न पठाईयो । पक्कै पनि राष्ट्रपतिले अहिले यो विषय पनि उठाउनुहुनेछ । र अमर कमले न्याय पाउनेछन् ।
२०७० सालको निर्वाचनमा दार्चुलाबाट निर्वाचित सांसद गणेशबहादुर ठगुन्ना पनि आफ्नो पक्षबाट सक्दो पहल गरेको बताउनुहुन्छ । भन्नुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित क्षेत्रहरुमा डेलिगेसन नै लिएर बमलाई छुटाउन पहल गर्न आग्रह गरेका छौँ । संसदमा पनि यो कुरा जोडदार तरिकाले उठाएका छौँ । आशा छ राष्ट्रपतिको भ्रमणले अमर बमलाई न्याय दिनेछ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले कानुनी प्रतिरक्षा भन्दा राष्ट्रपतिको तहबाट माफी दिन अनुरोध गरेमा छुट्ने बिकल्प अगाडि सारेको थियो । नेपाल सरकारले बमलाई माफी दिन युएई सरकारलाई पत्र पठाइसकेको छ । युएईले त्यसको ठोस जवाफ दिएको छैन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले युएईका प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर अमरलाई माफी दिन अनुरोध गरेका थिए ।
अहिले राष्ट्रपति भ्रमणको समयमा त्यस बारेमा केही कुरा नउठेपनि उनको परिवारलाई भने राष्ट्रपतिको भ्रमणले केही आशा जगाएको छ । आश गरौँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अमरबहादुर बमलाई नयाँ जिवन दिन सफल हुनुहुनेछ ।